Fitsinjaram-pahefana :: Takin’ny Sefafi ny fanovàna ny fomba fifidianana ben’ny tanàna • AoRaha
Fitsinjaram-pahefana Takin’ny Sefafi ny fanovàna ny fomba fifidianana ben’ny tanàna
Tokony hapetraka haingana ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ny toromarika nivohitra tamin’ny fanambaran’ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena (Sefafi) omaly. Heverin’ity sehatra ity fa ilaina mba hifameno sy hiara-hiasa akaiky ary hamaritra an’ireo tetikasam-pampandrosoana miainga amin’ny filàn’ny mponina ao aminy ny ben’ny tanàna sy ny lehiben’ny faritra ary ny filoham-pokontany.
« Ny filoham-pokontany dia tokony hofidiana amin’ny alalan’ny fanatanterahana fivoriambem-pokonolona », hoy ny fanambaràna, ankoatra ny soson-kevitra ny amin’ ny fandrafafetana lisitra mpanolotsaina fotsiny ihany, izay hofidian’ny olom-pirenena. Ireo mpanolotsaina indray avy eo no hifidy ny ben’ny tanàna. “Tsy hisy intsony amin’izay fotoana izay ireo mpanolotsaina mitsivalam-pandry amin’ny asa fampandrosoana hotanterahin’ny ben’ny tanàna”, araka ny fomba fijerin’ny Sefafi.
Naroson’ny Sefafi ihany koa ny filàna ny famitàna ao anatin’ny enim-bolana farany amin’ity taona 2019 ity ny fifidianana eo anivon’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram- pahefana isam-paritra, dia ny ben’ny tanàna , ny lehiben’ny faritra ary ireo sefom-pokontany. “Mba hahafahana mandrindra araka ny tokony ho izy ny fampandrosoana isam-paritra miainga amin’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram- pahefana eny ifotony no itakiana an’izany”, araka ny fanazavana.
Nohitsian’ny Sefafi fa mitaredretra sady tsy nahomby ireo paikady rehetra teo aloha niandrandrana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Nampitarazoka ny fampandrosoana ny firenena izany ary tsy namaha olana, indrindra fa amin’ny fanomezana ny fahefana bebe kokoa an’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eny ifotony.
Nanambara ny Sefafi fa tsy tokony hotantanan’ny minisiteran’ny Atitany intsony io vondrom-bahoaka isam-paritra io fa homena fahefana malalaka hitantana ny loharanon-kareny. “Tokony hijanona ho mpanamora ny fahazoan’ireo vondrom-bahoakam-paritra ireo izay tokony ho ilainy fotsiny ihany ny fitondram-panjakana”, hoy ny Sefafi.
Tsy nanisy resaka firy momba ny fikasan’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry hametraka an’ireo governora isam-paritra kosa ity rafitra ity tao anatin’ny fanambaràna.
Baolina kitra – Amboaran’ny KAF Arovana amin’ny fepetra hentitra ny Cnaps Sport atsy Afrika Atsimo
Loza mitatao amin’ny fitsaboana Miparitaka ireo mpanotra sandoka
Loabary an-dasy Hifanankalozana hevitra eny Ankatso ny tontolon’ ny fandikan-teny
Aretina hafahafa :: Nivoaka tamin’ny mason-kodiny ny fivalanan-dranony, fony fahavelony
Fitandroana ny filaminana :: Nisafo tampoka tamin’ny alina ireo minisitra